QIIMAYN: Kulankii Ugu Fiicnaa, Xulkii Niyadjabka Ugu Wayn La Kulmay, Goolkii Ugu Quruxda Badnaa Koobka Aduunka Iyo Waxyaabo Badan Oo Ay Qiimayn Ku Sameeyeen Khabiirada Skys Sports Ee Charlie Nicholas & Paul Merson - GOOL24.NET
QIIMAYN: Kulankii Ugu Fiicnaa, Xulkii Niyadjabka Ugu Wayn La Kulmay, Goolkii Ugu Quruxda Badnaa Koobka Aduunka Iyo Waxyaabo Badan Oo Ay Qiimayn Ku Sameeyeen Khabiirada Skys Sports Ee Charlie Nicholas & Paul Merson
July 17, 2018 Mahamoud Batalaale
Koobka aduunka ayaa xalay si rasmi ah loogu soo gaba gabeeyay magaalada Moscow ee dalka Ruushka kadib markii uu xulka qaranka France guul 4-2 ahayd ka gaadhay Croatia waxayna Fifa bixisay abaal marinaha shaqsiga ah oo dhamaystiran. Koobkii aduuka ee Russia ku soo xidhmay ayaa lagu tilmamay koobkii aduunka ee ugu xamaasada badnaa iyada oo goolal tiro badan iyo soo laabashooyin cajiib ahi ay ka soo dhaceen.
Laakiin khabiirada Sky Sports ee Charlie Nicholas & Paul Merson ayaa sameeyay qiimayn iyaga u gooni ah oo la xidhiidha wax walba oo muhiim ka ahaa koobka aduunka waxayna bixiyeen bixiyeen abaal marino fikiradooda iyo wixii ay arkeen ku salaysan iyaga oo khilaafay abaal marinihii ay FIFA bixisay.
Charlie Nicholas & Paul Merson ayaa soo doortay xidigii tartanka koobka aduunka ugu fiicnaa iyaga oo gabi ahaanba aan soo dooran Luka Modric oo abaal marintan ku guulaystay waxayna sidoo kale soo xusheen goolkii tartanka koobka aduunka ugu fiicnaa.
Charlie Nicholas & Paul Merson ayaa dhinaca kale soo doortay kulankii koobka aduunka ugu xiisaha badnaa iyaga oo ku kala qaybsamay, waxayna sidoo kale ka hadleen xulkii ugu niyadjabka waynaa ee koobka aduunka laga soo reebay.
Haddaba Shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo koobnaysa qiimaynta iyo xulashada ay sameeyeen khabiirada Sky Sports ee Charlie Nicholas & Paul Merson iyaga oo marar badan ku kala fikrad duwan qiimaynta ay sameeyeen. Halkan ayaanad kaga bogan kartaa qiimaynta ay koobka aduunka ku sameeyeen.
Xidigii Tartanka Koobka Aduunka Ugu Fiicnaa:
Khabiirada Sky Sports ee Charlie Nicholas iyo Paul Merson ayaa ku qaybsaday xidiga tartanka koobka aduunka ugu fiicnaa laakiin waxay ka midaysan yihiin in aanu ahayn Luka Modric oo ay FIFA gudoonsiisay abaal marintan.
Charlie Nicholas ayaa xidiga tartankii koobka aduunka ugu fiicnaa siiyay da’yarka ree France ee Kylian Mbappe wuxuuna sheegay in wax yar uu Mbappe ka horeeyay Modric oo abaal marintan la gudoonsiiyay. Mbappe ayaa isna ku guulaystay abaal marinta da’yarkii ugu fiicnaa koobka aduunka balse Nicholas ayaa aaminsan in uu u qalmay abaal marinta wayn ee kubbada dahabka ah.
Lakaiin Paul Person ayaa isna xidigii koobka aduunka ugu fiicnaa u doortay Kieran Trippier oo bandhig layaaleh ka soo sameeyay xulkiisa England wuxuuna sheegay in abaal marinta xidiga koobka aduunka ugu fiican uu u qalmay Trippier. Qaabka ay u soo kala doorteen xidiga tartanka koobka aduunka ugu fiicnaa halkan ka eeg.
Charlie Nicholas: Kylian Mbappe
Paul Merson: Kieran Trippier
Goolkii Tartanka Koobka Aduunka Ugu Quruxda Badnaa:
Khabiirada Sky Sports ee Charlie Nicholas iyo Paul Merson ayaa isku raacay in goolkii uu Lionel Messi ka dhaliyay kulankii Nigeria uu ahaa goolkii ugu quruxda badnaa ee koobka aduunka.
Nicolas ayaa sheegay in goolkii uu dhaliyay da’yarka France ee Benjamin Pavard uu ugu dhawaan ahaa goolkii ugu fiicnaa marka la eego qaabka uu darbada u sameeyay laakiin waxa uu xusay in cadaadiskii uu Messi kala kulmayay difaaca Nigeria iyo qaabkii saxda ahayd ee uu goolkan ku dhamaystiray ay ka dhigayso gookii ugu fiicnaa Russia 2018.
Paul Merson ayaa markan saaxiibkiisa Nicholas ku waafaqay in goolkii uu Lionel Messi dhaliyay uu ahaa goolkii ugu fiicnaa koobka aduunka. Merson ayaa sheegay in dhamaan goolashii koobka aduunka laga dhaliyay ay noqon karaan kuwo tababarka lagu soo sameeyay balse uu goolkii Messi ahaa mid ka duwan. Qaabka ay goolka u soo kala doorteen halkan ka eeg.
Charlie Nicholas: Lionel Messi v Nigeria
Paul Merson: Lionel Messi v Nigeria
Xidigii Xulka Qaranka England Ugu Fiicnaa:
Markale Paul Merson iyo Charlie Nichols ayaa ku qaybsamay xidigii xulka qaranka England ugu fiicnaa wuxuuna Nicholas doortay in goolhaye Jordan Pickford uu ahaa xidigii Three Lions ugu fiinaa intii Russia la joogay balse Pual Merson oo aaminsan in Kieran Trippier uu u qalmay xidigi tartanka ugu fiicnaa ayaa markale Trippier u soo doortay xidigii England ugu fiicnaa:
Charlie Nicholas: Jordan Pickford
Kulankii Tartanka Koobka Aduunka Ugu Fiicnaa:
Waxaa markale arinta ku hormaray Nicholas wuxuuna kulankii koobka aduunka ugu fiicnaa u soo doortay kulankii xulalka qaramada France iyo Argentina ee ay todobada gool iska dhaliyeen markaas oo uu France guul 4-3 ah ka gaadhay Argentina.
Laakiin Paul Merson ayaa kulankii koobka aduuka ugu fiicnaa u soo doortay kulankii xulalka qaramada Spain iyo Portugal ay ku furteen group B ee lixda gool ay iska dhaliyeen. Spain iyo Portugal ayaa babraro 3-3 ahaa ku kala baxay waana kulanka uu Merson u qaatay kulankii koobka aduunka ugu fiicnaa.
Charlie Nicholas: France 4-3 Argentina
Paul Merson: Spain 3-3 Portugal
Xulka Niyadjabkii Ugu Waynaa Koobka Aduunka Kala Tagay:
Khabiirka Sky Sports ee Charlie Nicholas ayaa sheegay in xulka qaranka Germany uu ahaa kan niyadjabka ugu wayn kala soo laabtay koobka aduunka wuxuuna eedayn dusha ugaga tuuray tababare Joachim Low kaas oo uu sheegay in uu si aad ah daacad ugu ahaa xidigo ay ka mid yihiin Mesuto Ozil iyo Thomas Muller.
Charlie Nicholas ayaa sheegay in xulalka qaramada Brazil iyo Argentina ay la kulmeen niyadjab wayn balse uu isagu Germany u dooranayo xulkii niyadjabka ugu wayn kala soo laabtay koobkii aduunka ee Russia ku soo xidhmay.
Laakiin Paul Merson ayaa sheegay in ayna isaga layaab ku noqon in Germany iyo Argentina ay niyadjab la kulmeen wuuxuna sheegay in uu horeba u cadeeyay in ayna xulalkani fursad u haysan koobkii aduunka ee Russia ku soo xidhmay, sidaa daraadeed waxa uu xulkii niyadjabka ugu wayn kala soo laabtay koobka aduuka u xushay Brazil.
Charlie Nicholas: Germany
Paul Merson: Brazil
Geesiyada Aan Loo Heesin Ee Koobka Aduunka:
Tartan kasta oo la ciyaaro waxaa jira ciyaartoy loo yaqaan geesiyada aan loo heesin iyada oo ay dadku moogan yihiin wax qabadkooda balse ay muhiimad wayn u leeyihiiin kooxaha ay ka tirsan yihiin, sidaa daraadeed, Charlie Nicholas ayaa geesigii koobka aduunka ee aan loo heesin u soo qaatay xidiga khadka dhexe ee xulka qaranka France ee Blaise Matuidi.
Laakiin Pual Merson ayaa laba xidig oo xulka England ah u soo doortay geesiyada aan loo heesin wuxuuna soo xushay Kieran Trippier iyo Harry Maguire sabab wayn u ahaa xulkii England ee heerka groupyada tartamada waa wayn ku soo hadii jiray uu kaalinta afraad ka soo galay koobkii aduunka ee Russia 2018.
Charlie Nicholas: Blaise Matuidi
Paul Merson: Kieran Trippier and Harry Maguire
Haddaba akhriste, marka aad si fiican uga soo boqotay qiimaynta khabiirada Sky Sports ee koobkii aduunka, miyaad ku raacsan tahay qaabka ay u soo xusheen xidigaha iyo waxyaabaha kale ee ay qiimaynta ku sameeyeen? Fikradaada waxaad noogu soo gudbin kartaa qaybta commentska sidoo kale warbixinta la Share-garee asxaabta kale.